Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee Jubbaland oo maanta la soo gaba gabeynaayo – STAR FM SOMALIA
Maanta oo Arbaco ah ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee Gobolka JubBada hoose lagu soo gabo gabeeyo doorashada Xildhibaannada Aqalka hoose, gaar ahaan xubnaha ku soo aadey maamulka Jubbaland.
Waxaa maanta la filayaa in Kismaayo lagu soo doorto 3 kursi oo ka mid ah Aqalka hoose, waxaana kuraastan ay yihiin kuwa kaliya ee dhanka Jubbaland ku harsan.
Ergooyinka doorashada waxay horey u doorteen 40 Kursi, waxaana markii Saddexdaan lagu daro sidaasi ku dhameystirmaya 43 kursi ee Beelaha dega Jubbaland looga qoondeeyey aqalka hoose ee Baarlamaanka.
Jubbaland ayaa noqon doona haddii maanta kuraastan lasoo doorto maamulkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u dhameystira xubnaha kaga soo aaday labada aqalka ee Baarlamaanka.
Doorashooyinka Xubnaha Aqalka hoose, ayaa si wanaagsan kaga socda Magaalooyinka Cadaado, Baydhabo iyo Garowe.
Guddiga Doorashada Dadban ee dalka ayaa shaaciyay todobaadkii hore in ilaa iyo hada la doortay Xildhibaano gaarayo 155 Xildhibaan oo ay ku jiraan Xubnaha Aqalka Sare ee dalka.
Gudoomiyihii Maxkamadda Gobolka Banaadir oo shaqadii laga joojiyay